အရမျးကွိုကျခဲ့ရတဲ့ သီခငျြးလေးကို သီခငျြးပိုငျရှငျဖွဈတဲ့ တေးသံရှငျကွီးေ မခလာနဲ့အတူ ပွနျလညျ သီဆိုထားတဲ့ ယှနျးမွတျသူ – Shwe Likes
ပရိသတျ ကွီးရေ ယှနျးမွတျသူ ကတော့ လတျ တလောမှာ ပရိသ တျပါးစပျဖြားမောရေ ပနျးအစား ဆုံး သီခငျြးရဲ့ပိုငျရှငျလို့ ဆိုရမှာပါ။ ပထမ Covid ကာလမှာလ ညျး သူမရဲ့အဆ ငျပွေ မနပေါဘူးသီခငျြးဟာ
ပရိသတျေ တှအတှကျ ရပေနျးစားခဲ့ပွီး အခုဒု တိယ Covid ကာလမှာ ဆိုရငျလ ညျး သီခငျြး မထှကျ ရသေးပမေ ယျ့သူမရဲ့ ”နငျလမျးေ တှ့ခဲ့ရငျ”သီခငျြးဟာ ပရိသတျေ တှပါးစပျ ဖြားနရော ယူထားခဲ့ တဲ့သီခငျြးဖွဈ ခဲ့တာပါ။
လကျတေ လာမှာလညျး အသဈစကျ စကျထှကျ ရှိထားတဲ့ 𝘽𝙍𝘼𝙄𝙉𝙇𝙀𝙎𝙎 Music Video လေးက လညျး ပရိသတျရငျထဲ ကိုရော ကျရှိကာTikTok မှာလညျး လူအမြားကွိုကျနှဈ သကျကာ ဆော့ကစားနတောေ တှ့ရပါ တယျ။
လကျရှိ မှာလညျး အနုပညာသီခြ ငျးသဈတှေ ထပျမံထှကျရှိမ ယျ့ ယှနျးမွတျ သူကတော့ ပွညျသူခဈြ အဆိုတျောကွီး မခေလာထံ သို့ပွနျလညျသီ ဆိုခငျြတဲ့သီ ခငျြးလေး အတှကျသှားရောကျ ခဲ့တယျလို့သိ ရပါတယျ။
“တေးရေး တေးဆိုဗတ်ြတ အသံ အားကောငျး တဲ့ သမီး ယှနျွး မတျသူ ခဈြငယျအိမျမှာ တှကွေ့ ဆုံကွ စကားေ တှပွောကွတယျသ မီးယှနျးမွတျသူ ငယျငယျထဲကစှဲ လနျးခဲ့တဲ့ ခဈြငယျသီခငျြးေ လးတပု ဒျရှိတယျတဲ့ 😘 အတူဆိုခငျြတဲ့ သီခငျြးလေးနာမညျ ဘာဖွဈမလဲ ခဈြတို့စဉျးစား ကွညျ့လို ကျနျော😘ခု့တော့ ပွောပွသေးဘူး
ခဈြငယျစိ တျပေါ့ပါး တဲ့ခြိနျကြ ပွော ပမယျနျော ❤️”ဆို တဲ့စာလေးနဲ့ ခဈြင ယျအကောငျ့က တငျလာခဲ့တဲ့အပွငျ ယှနျးမွတျ သူကိုယျ တိုငျကလညျး”အနျတီခဈြငယျနဲ့ တူတူ ပွနျဖ နျတီးမယျ့ သီခငျြးလေးက ဘယျသီခငျြးလေးဖဈမလဲ? ❤️ဆိူပွီး ခဈြတဲ့ပရိ သတျတှကေိုေ မးခှနျးထုတျခဲ့တာ ပါ။ ပရိသတျတှလျေား ခနျ့မှနျးခဲ့ကွ ပါဦးနျော။ Credit-
ပရိသတ် ကြီးရေ ယွန်းမြတ်သူ ကတော့ လတ် တလောမှာ ပရိသ တ်ပါးစပ်ဖျားမောရေ ပန်းအစား ဆုံး သီချင်းရဲ့ပိုင်ရှင်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ပထမ Covid ကာလမှာလ ည်း သူမရဲ့အဆ င်ပြေ မနေပါဘူးသီချင်းဟာ
ပရိသတ်ေ တွအတွက် ရေပန်းစားခဲ့ပြီး အခုဒု တိယ Covid ကာလမှာ ဆိုရင်လ ည်း သီချင်း မထွက် ရသေးပေမ ယ့်သူမရဲ့ ”နင်လမ်းေ တွ့ခဲ့ရင်”သီချင်းဟာ ပရိသတ်ေ တွပါးစပ် ဖျားနေရာ ယူထားခဲ့ တဲ့သီချင်းဖြစ် ခဲ့တာပါ။
လက်တေ လာမှာလည်း အသစ်စက် စက်ထွက် ရှိထားတဲ့ 𝘽𝙍𝘼𝙄𝙉𝙇𝙀𝙎𝙎 Music Video လေးက လည်း ပရိသတ်ရင်ထဲ ကိုရော က်ရှိကာTikTok မှာလည်း လူအများကြိုက်နှစ် သက်ကာ ဆော့ကစားနေတာေ တွ့ရပါ တယ်။
လက်ရှိ မှာလည်း အနုပညာသီချ င်းသစ်တွေ ထပ်မံထွက်ရှိမ ယ့် ယွန်းမြတ် သူကတော့ ပြည်သူချစ် အဆိုတော်ကြီး မေခလာထံ သို့ပြန်လည်သီ ဆိုချင်တဲ့သီ ချင်းလေး အတွက်သွားရောက် ခဲ့တယ်လို့သိ ရပါတယ်။
“တေးရေး တေးဆိုဗျတ္တ အသံ အားကောင်း တဲ့ သမီး ယွန်ြး မတ်သူ ချစ်ငယ်အိမ်မှာ တွေ့ကြ ဆုံကြ စကားေ တွပြောကြတယ်သ မီးယွန်းမြတ်သူ ငယ်ငယ်ထဲကစွဲ လန်းခဲ့တဲ့ ချစ်ငယ်သီချင်းေ လးတပု ဒ်ရှိတယ်တဲ့ 😘 အတူဆိုချင်တဲ့ သီချင်းလေးနာမည် ဘာဖြစ်မလဲ ချစ်တို့စဉ်းစား ကြည့်လို က်နော်😘ခု့တော့ ပြောပြသေးဘူး
ချစ်ငယ်စိ တ်ပေါ့ပါး တဲ့ချိန်ကျ ပြော ပမယ်နော် ❤️”ဆို တဲ့စာလေးနဲ့ ချစ်င ယ်အကောင့်က တင်လာခဲ့တဲ့အပြင် ယွန်းမြတ် သူကိုယ် တိုင်ကလည်း”အန်တီချစ်ငယ်နဲ့ တူတူ ပြန်ဖ န်တီးမယ့် သီချင်းလေးက ဘယ်သီချင်းလေးဖစ်မလဲ? ❤️ဆိူပြီး ချစ်တဲ့ပရိ သတ်တွေကိုေ မးခွန်းထုတ်ခဲ့တာ ပါ။ ပရိသတ်တွေလာ်း ခန့်မှန်းခဲ့ကြ ပါဦးနော်။ Credit-